Story ပွောပါ။ | မာသငျ
လူတိုငျးမှာ ပွောပွဖို့ထိုကျတနျတဲ့ ကွိုးစားမှု သမိုငျးမှတျတမျး ဇတျလမျးကိုယျစီရှိကွပါတယျ။
ပွောမပွပဲ မွကွေီးထဲထိ ယူသှားခဲ့ရငျ သငျ့ကို သိပျမကွာခငျ လူတှေ မသှေ့ားကွပါလိမျ့မယျ။
ထိုအတူပဲ..လုပျငနျးတိုငျးမှာလဲအခကျအခဲပေါငျးမြားစှာကို ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ကွိုးစားမှုသမိုငျးမှတျတမျးကိုယျစီရှိကွပါတယျ။
စားသုံးသူတှကေို ပွောပွဖို့မားကကျတငျးအဖှဲ့မှာ တာဝနျရှိပါတယျ။
ဈေးကှကျမှာရှိတဲ့ စားသုံးသူတှရေဲ့စိတျထဲမှာ ကိုယျ့လုပျငနျး အကွောငျး သတိတရ ရှိနဖေို့ဆိုတာ လုပျငနျးတိုငျး လိုခငျြတဲ့အရာပါ။
ဒါကွောငျ့လဲ မမေ့သှားအောငျ အထပျထပျအခါခါ ကွျောငွာနကွေရတယျ။
အမှနျတော့လူတှရေဲ့စိတျထဲမှာ ကိုယျ့လုပျငနျး ရှိနဖေို့ဆိုတာ လုပျငနျးဘကျက Story ပွောပွနိုငျဖို့လိုပါတယျ။
လူတှမှောလဲ Story ဆိုတာရှိသလို …
လုပျငနျးမှာလဲ Story ဆိုတာ ရှိပါတယျ။
လုပျငနျးတဈခု ရဲ့Story နဲ့ လူတဈယောကျရဲ့Story နဲ့ပေါငျးစပျလိုကျခြိနျမှာ၊ ခံစားခကျြဆိုတာ ပါဝငျလာတဲ့အတှကျ စားသုံးသူတှရေဲ့စိတျထဲကို စှဲမွဲစှာဝငျရောကျသှားပါတယျ။
ဈေးကှကျမှာ ..ကိုယျ့လုပျငနျး ဘရနျးတဈခုကို တညျဆောကျရာမှာ Story ထဲ့ပေးရပါတယျ။
ဈေးကှကျမှာ .. Personal Brand လူပုဂ်ဂိုလျဘရနျး တညျဆောကျရာမှာလဲ Story ထဲ့ပေးရပါတယျ။
လုပျငနျးဆိုတာ အသကျမဲ့ပါတယျ။ ခံစားခကျြ မဲ့ပါတယျ။
လုပျငနျးတဈခု က လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးတဈယောကျရဲ့story နဲ့ပေါငျးလိုကျခြိနျမှာ အသကျဝငျလာပါတော့တယျ။ ခံစားခကျြ ရှိလာပါတော့တယျ။ ဒါကို Emotional Marketing (ခံစားခကျြအခွပွေု မားကကျတငျးလို့ချေါပါတယျ။)
အောငျသမာဓိ နဲ့ဦးအောငျ Story
မိုကျခရိုဆော့ ကုမ်မဏီ နဲ့ဘီကိတျ story
Apple ကုမ်မဏီ နဲ့ စတီဈဂြော့ story
အာလီဘာဘာ နဲ့ဂကျြမာ story
ဒါကွောငျ့ သငျလဲ သငျ့လုပျငနျး အကွောငျး Story ပွောမယျဆိုရငျ အောကျပါ (၁၀) ခကျြ ကို သတိရပါ။
၁။ လုပျငနျးထောငျဖွဈတဲ့ အကွောငျး (Founding Story)
ဘာကွောငျ့ ဒီလုပျငနျးကို ထောငျဖွဈသှားတာလဲ ?
၂။ ပွောငျးလဲအောငျကွိုးစားတဲ့အကွောငျး (Change Story )
ဘာတှကေို ဘယျလိုမတူအောငျ ကွိုးစားခဲ့ရသလဲ ?
၃။ လုပျငနျးရညျမှနျးခကျြအကွောငျး (Vision Story)
လုပျငနျးအနနေဲ့ ဘယျလိုမြှျောမှနျးထားသလဲ ?
၄။ လုပျငနျးဗြူဟာအကွောငျး (Strategy Story)
ရညျမှနျးခကျြအောငျမွငျဖို့အတှကျ လုပျငနျးအနနေဲ့ဘာတှဘေယျလိုလုပျဆောငျဖို့ပွငျဆငျသလဲ ?
၅။ စားသုံးသူဖောကျသညျမြားအကွောငျး (Customer Story)
စားသုံးသူတှရေဲ့ယုံကွညျမှု နဲ့အားပေးမှု ကို ဘယျလိုရလာခဲ့သလဲ ?
၆။ အရောငျးအကွောငျး (Sale Story)
လုပျငနျးအနနေဲ့ဈေးကှကျတငျရောငျးခရြာမှာ ဘယျလို အခကျအခဲတှေ တှခေဲ့ရလဲ ?
ရ။ ဈေးကှကျရှာဖှခွေငျး အကွောငျး (Marketing Story)
ဈေးကှကျမှာ ကိုယျလိုလုပျငနျးတှအေမြားကွီးရှိရာမှာ ကိုယျ့လုပျငနျးက ဘာတှေ ကှာခွားသလဲ ?
၈။ ခေါငျးဆောငျမှု အကွောငျး (Leading Story )
ကိုယျ့လုပျငနျးက လုပျသားတှအေပျေါမှာ ဘယျလိုအုပျခြုပျစီမံခနျ့ခှဲသလဲ ?
၉။ လုပျငနျးယုံကွညျမှု နဲ့တနျဖိုးထားသောအရာမြားအကွောငျး (Believe story)
လုပျငနျးရဲ့တနျဖိုးထားရတဲ့ အခကျြတှကေဘာတှလေဲ၊ ဘယျလိုကွိုးစားတညျဆောကျ၊ထိနျးသိမျးနသေလဲ?
၁၀။ ဝနျထမျးခနျ့ထားရေးအကွောငျး (Recruiting Story)
လုပျငနျးအနနေဲ့ဝနျထမျးတှကေို ဘယျလိုရှေးခယျြပွီး၊ ဘယျလိုခနျ့ထား၊ လုပျငနျးခှငျဝငျစသေလဲ ?
သငျ့ လုပျငနျးအနနေဲ့ ဈေးကှကျမှာ စားသုံးသူတှေ ကိုယျ့အမှတျတံဆိပျကို သတိရမှတျမိနစေခေငျြတယျဆိုရငျ အထကျပါ Story တဈခုမဟုတျတဈခုကို ပွောပွတတျရပါမယျ။
သငျ့ကုနျပစ်စညျး (Product) ဘယျလောကျကောငျးကောငျးအတုခိုးလို့ရပါတယျ။
သငျ့ အရညျအသှေး (Quality)ဘယျလောကျကောငျးကောငျးအတုခိုးလို့ရပါတယျ။
သငျ့ ဈေးနုနျး (Price)ဘယျလောကျခခြ သငျ့ထကျကြ တဲ့ သူရှိပါတယျ။
သငျ့ ဝနျဆောငျမှု(Service)ဘယျလောကျကောငျးကောငျး ပိုကောငျးအောငျ အတုခိုးလို့ရပါတယျ။
သငျ့ ရဲ့ကွိုးစားမှု သမိုငျးဇတျလမျး Story၊
သငျ့ လုပျငနျးရဲ့သမိုငျး Story ကတော့ သငျ တဈဦးတညျးပဲ ရှိပါတယျ။
သမိုငျးဆိုတာ တူအောငျ တုလို့မရဘူးလေ။
သငျ့ လုပျငနျးကို အမြားနှငျ့မတူကှဲထှကျစေ(Unique) စသေောအရာသညျ သငျ့လုပျငနျးရဲ့Story ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့လုပျငနျး ကွိုးစားမှု သမိုငျးဇတျကွောငျး ဆိုတာ တနျဖိုးကွီးပါတယျ။
သငျကိုယျတိုငျ မထေ့ားတယျဆိုရငျ စားသုံးသူဖောကျသညျမြားကလဲ မထေ့ားပါလိမျ့မယျ။
အထကျပါ မေးခှနျး (၁၀) ခု ဖတျပါ ။
ပွီးရငျ … ပွောပွပါ။
စားသုံးသူတှေ စိတျထဲဝငျသှားတဲ့အထိပေါ့။ ဒါကို စိတျကှကျဝစေု (Mind share) လို့ချေါပါတယျ။
လူတိုင်းမှာ ပြောပြဖို့ထိုက်တန်တဲ့ ကြိုးစားမှု သမိုင်းမှတ်တမ်း ဇတ်လမ်းကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
ပြောမပြပဲ မြေကြီးထဲထိ ယူသွားခဲ့ရင် သင့်ကို သိပ်မကြာခင် လူတွေ မေ့သွားကြပါလိမ့်မယ်။
ထိုအတူပဲ..လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလဲအခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကြိုးစားမှုသမိုင်းမှတ်တမ်းကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
စားသုံးသူတွေကို ပြောပြဖို့မားကက်တင်းအဖွဲ့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အကြောင်း သတိတရ ရှိနေဖို့ဆိုတာ လုပ်ငန်းတိုင်း လိုချင်တဲ့အရာပါ။
ဒါကြောင့်လဲ မေ့မသွားအောင် အထပ်ထပ်အခါခါ ကြော်ငြာနေကြရတယ်။
အမှန်တော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ရှိနေဖို့ဆိုတာ လုပ်ငန်းဘက်က Story ပြောပြနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
လူတွေမှာလဲ Story ဆိုတာရှိသလို …
လုပ်ငန်းမှာလဲ Story ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု ရဲ့Story နဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့Story နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ချိန်မှာ၊ ခံစားချက်ဆိုတာ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် စားသုံးသူတွေရဲ့စိတ်ထဲကို စွဲမြဲစွာဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာ ..ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဘရန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာမှာ Story ထဲ့ပေးရပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာ .. Personal Brand လူပုဂ္ဂိုလ်ဘရန်း တည်ဆောက်ရာမှာလဲ Story ထဲ့ပေးရပါတယ်။
လုပ်ငန်းဆိုတာ အသက်မဲ့ပါတယ်။ ခံစားချက် မဲ့ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု က လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့story နဲ့ပေါင်းလိုက်ချိန်မှာ အသက်ဝင်လာပါတော့တယ်။ ခံစားချက် ရှိလာပါတော့တယ်။ ဒါကို Emotional Marketing (ခံစားချက်အခြေပြု မားကက်တင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။)
အောင်သမာဓိ နဲ့ဦးအောင် Story
မိုက်ခရိုဆော့ ကုမ္မဏီ နဲ့ဘီကိတ် story
Apple ကုမ္မဏီ နဲ့ စတီစ်ဂျော့ story
အာလီဘာဘာ နဲ့ဂျက်မာ story
ဒါကြောင့် သင်လဲ သင့်လုပ်ငန်း အကြောင်း Story ပြောမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ (၁၀) ချက် ကို သတိရပါ။
၁။ လုပ်ငန်းထောင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း (Founding Story)
ဘာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းကို ထောင်ဖြစ်သွားတာလဲ ?
၂။ ပြောင်းလဲအောင်ကြိုးစားတဲ့အကြောင်း (Change Story )
ဘာတွေကို ဘယ်လိုမတူအောင် ကြိုးစားခဲ့ရသလဲ ?
၃။ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်အကြောင်း (Vision Story)
လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျှော်မှန်းထားသလဲ ?
၄။ လုပ်ငန်းဗျူဟာအကြောင်း (Strategy Story)
ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်သလဲ ?
၅။ စားသုံးသူဖောက်သည်များအကြောင်း (Customer Story)
စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှု နဲ့အားပေးမှု ကို ဘယ်လိုရလာခဲ့သလဲ ?
၆။ အရောင်းအကြောင်း (Sale Story)
လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဈေးကွက်တင်ရောင်းချရာမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ တွေ့ခဲ့ရလဲ ?
ရ။ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း အကြောင်း (Marketing Story)
ဈေးကွက်မှာ ကိုယ်လိုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိရာမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘာတွေ ကွာခြားသလဲ ?
၈။ ခေါင်းဆောင်မှု အကြောင်း (Leading Story )
ကိုယ့်လုပ်ငန်းက လုပ်သားတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲသလဲ ?
၉။ လုပ်ငန်းယုံကြည်မှု နဲ့တန်ဖိုးထားသောအရာများအကြောင်း (Believe story)
လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့ အချက်တွေကဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုကြိုးစားတည်ဆောက်၊ထိန်းသိမ်းနေသလဲ?
၁၀။ ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေးအကြောင်း (Recruiting Story)
လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ပြီး၊ ဘယ်လိုခန့်ထား၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်စေသလဲ ?
သင့် လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဈေးကွက်မှာ စားသုံးသူတွေ ကိုယ့်အမှတ်တံဆိပ်ကို သတိရမှတ်မိနေစေချင်တယ်ဆိုရင် အထက်ပါ Story တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကို ပြောပြတတ်ရပါမယ်။
သင့်ကုန်ပစ္စည်း (Product) ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအတုခိုးလို့ ရပါတယ်။
သင့် အရည်အသွေး (Quality)ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအတုခိုးလို့ ရပါတယ်။
သင့် ဈေးနုန်း (Price)ဘယ်လောက်ချချ သင့်ထက်ကျ တဲ့ သူရှိပါတယ်။
သင့် ဝန်ဆောင်မှု(Service)ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ပိုကောင်းအောင် အတုခိုးလို့ ရပါတယ်။
သင့် ရဲ့ ကြိုးစားမှု သမိုင်းဇတ်လမ်း Story၊
သင့် လုပ်ငန်းရဲ့ သမိုင်း Story ကတော့ သင် တစ်ဦးတည်းပဲ ရှိပါတယ်။
သမိုင်းဆိုတာ တူအောင် တုလို့ မရဘူးလေ။
သင့် လုပ်ငန်းကို အများနှင့်မတူကွဲထွက်စေ(Unique) စေသောအရာသည် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့Story ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်း ကြိုးစားမှု သမိုင်းဇတ်ကြောင်း ဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင် မေ့ထားတယ်ဆိုရင် စားသုံးသူဖောက်သည်များကလဲ မေ့ထားပါလိမ့်မယ်။
အထက်ပါ မေးခွန်း (၁၀) ခု ဖတ်ပါ ။
ပြီးရင် … ပြောပြပါ။
စားသုံးသူတွေ စိတ်ထဲဝင်သွားတဲ့အထိပေါ့။ ဒါကို စိတ်ကွက်ဝေစု (Mind share) လို့ခေါ်ပါတယ်။